fam basa pombi NEMA Imwe Phase ac motors matatu chikamu fan fan
Magetsi mota Mugadziri
Tine rakasimba R & D timu, uye isu tinogona kukudziridza uye kuburitsa Nema ac motors uye zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana nemadhirowa kana sampuli iyo vatengi vakapihwa. Mazhinji ezvigadzirwa zvedu atove neCSA / CUS, UL certification. Uye lab redu rave rakakwaniriswa neCSA / UL boka rewttnessed mugadziri kuyedzwa kwechitupa chirongwa kunoenderana neIO / IEC 17025: 2005
Chikamu chimwechete mota
Tiri kushandisa mune whosale imwechete chikamu mota uye zvimwe zvirevo zvemamota. Parizvino, Waylead yakazvimiririra yakagadzira 1 / 10-20HP, 48-250, 2, 4, 6, 8 matanda, anopfuura zviuru zviviri zvemhando yepamusoro-inoshanda, yakakosha-mhando mota.
Sehunyanzvi tsika yakasarudzika chikamu chikamu mota fekitori, edu ese motors uye ezvokutengeserana processors apfuura CSA & CUS certification, uye mamwe mota anewo UL chitupa. Pa-saiti mhando uye kugadzirwa zvinotarisirwa ne "6S". Tevedzera ISO9001 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi system.
Matatu Matanho Emota
Parizvino, Waylead yakazvimiririra yakagadzira 1 / 10-20HP, 48-250, 2, 4, 6, 8 matanda, anopfuura zviuru zviviri zvemhando yepamusoro-inoshanda, yakakosha-mhando mota. Seyenyanzvi tsika nhatu chikamu mota fekitori, edu ese mota uye ezvokutengeserana processors apfuura CSA & CUS certification, uye mamwe mota anewo UL chitupa.
Waylead ine ruzivo ruzivo, kugadzirwa, mhando manejimendi uye timu yebasa. Tinogona kugadzira "zvakagadzirwa-zvakagadzirwa" mota maererano nezvinodiwa nevatengi vakasiyana.
Yedu yese oem 56 Furemu Dripproof Matatu-Pasika Jet Pump Mota uye vekutengesa processor vanodarika CSA & CUS certification, uye mamwe mota anewo UL chitupa.
Tinogona kugadzira "yakashongedzwa" Tatu-Pasika JM Yakapetwa-Yakabatanidzwa Pump mota zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vakasiyana. Mota dzedu dzese dzinotumirwa kuUnited States, Canada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, nezvimwe. Motors anoshandiswa zvakanyanya mukuveza, mhepo compressors, mafuridzi, mafeni, mapampu emvura, mapombi emagetsi, nezvimwe.
Matatu-Pasika akamedura mota zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vakasiyana. Mota dzedu dzese dzinotumirwa kuUnited States, Canada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, nezvimwe. Motors anoshandiswa zvakanyanya mukuveza, mhepo compressors, mafuridzi, mafeni, mapampu emvura, mapombi emagetsi, nezvimwe.
Waylead yakahwina nyasha yevakawanda vanozivikanwa vatengi vepasirese nemhando yayo yepamusoro, mutengo unonzwisisika, kuendesa nguva uye basa rakanaka. Waylead inotarisira kushanda newe munguva pfupi iri kutevera!
Tarisa Zvigadzirwa Zvese
Isu tinotarisana nekuvandudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro-kumagumo misika. Yedu tsika nema ac mota zvinoenderana neNEMA zviyero, uye zvinonyanya kutumirwa kuUSA, CANADA, Mexico, Australia nedzimwe nzvimbo dzenyika.
Isu tine yedu yekuyedza lab uye yemhando yepamusoro uye yakazara yekuongorora michina, iyo inogona kuve nechokwadi cheiyo nema nema motors.
Waylead Motor Manufacturer, anga ari mumwe weboka reCixi Huili, akanyoresa logo ye "WAYLEAD" kuChina, Canada neU.SA mugore ra2008. Waylead iNational Hi-Tech Private Enterprise inoshanda mukutsvagisa, kugadzira, kugadzira, kutengesa uye service.
Matatu matatu akakwirira kugona uye epimendi mashandiro emagetsi emagetsi akave akasimbiswa neCanada neUS Energy department mu2007 na2010. Ese ma mota edu anotumirwa kuUSA, Canada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia zvichingodaro. Motors anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana dzeindasitiri uye dzekurima senge Woodworker, Air compressor, Blower, Fan, Water Pump, Hydraulic pump, Washing pump, Pool uye spa pombi, Ice cream Machine, Baking Equipment uye Garaji musuwo, nezvimwe.
Kurongeka Kuwanda KwaOne PieceTwo PiecesZvidimbu ZvitatuEse maQuantiteszvinogamuchirika.
Isu tinobvuma huwandu hwese kunyangwe chidimbu chimwe chete chataizotumira kwauri. Iko kune hombe stock idzi zvigadzirwa 'zvigadzirwa mudura redu uye chimwe kana zviviri zvidimbu harisi dambudziko kwatiri. Zvekutengesa, huwandu hwakawanda, mutengo uri nani. Isu tinokurudzira kuraira zvakanyanya sezvinobvira.
Kubhadhara kunogona kuve Telegraphic Transfer kana Paypal Kana kadhi rechikwereti kana kunyange Alipay. Isu tine makore anopfuura makumi matatu ane ruzivo pamusoro pekutengeserana kwenyika dzakawanda uye yakawanda yemubhadharo watinogona kugamuchira. Tinokutumira iwe maakaunti edu kana uchinge waita sarudzo kuti ndeipi nzira yauchatibhadhara.
Nzira yekuendesa ndeye nzira dzakasiyana siyana senge nemhepo, kana negungwa kana gonhi pasuo nepamhepo. Kune hushoma huwandu, tinokurudzira kutumira nendege kana neyairesi nekuti vashandi vegungwa vanotakura zvinhu havadi makadhi anorema anorema kupfuura 100kg pazasi. Zvakare, iyo yekufambisa nguva zvinoenderana nenzira yaunosarudza uye isu tichakupa imwe kuraira kana iwe uine nzvimbo yenzvimbo.
Isu tiri vamwe veavo vamiririri vezvinhu zvine mukurumbira pasi rese muChina uye isu tinovimbisa zvese izvi zvikamu zvemhando izvo zvatiri kutengesa ndezvechokwadi. Iko kune QR kodhi muzvikamu uye zvese zvaunogona kutarisa kubva kune yemhando 'webhusaiti webhusaiti.